XOG CULUS:Turkiga oo Droneskiisa Soomaliya Geynaya Kadib Masar Iyo Israel Hanjabaad Military Soomaliya - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG CULUS:Turkiga oo Droneskiisa Soomaliya Geynaya Kadib Masar Iyo Israel Hanjabaad Military Soomaliya
November 21, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 0
Qaahira – Ayaa Wada Isku day la doonayo in looga hortago saameynta Turkiga ee Badda Cas iyo hamiga Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee gobolka, waxaa soo baxayay warar sheegaya in Masar ay sameysatay weji seddex geesood ah oo ay la leedahay Israel iyo Sudan.
Yeni Safak , oo ah wargeys maalinle ah oo aad ugu dhaw dowlada Ankara, ayaa soo wariyay Nofeembar 14. in saraakiisha sare ee militariga Masar, Israel iyo Sudan ay qaban doonaan kulan – taariikhda iyo goobta aan la shaacin – si looga wada hadlo isku dubaridka amniga ee Gobolka Badda Cas wuxuu qorsheynayaa inuu xadido saameynta Turkiga ku leeyahay gobolka, kadib codsi Masaari ah, maadaama Masar “aysan ku fududaan” duulaanka Turkiga ee Soomaaliya. Wargeysku wuxuu tilmaamay in saraakiisha Adeegga Sirdoonka Guud ee Masar, wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Masar iyo taliyaha Masaarida ee Koonfurta Gobolka ay ka qayb qaadan doonaan kulanka.
Isaga oo ka hadlaya saameynta sii kordheysa ee Turkiga ee Soomaaliya iyo Masar ee ku biiraya xulafada, Maj. Gen. Hatem Bashat, xubin ka tirsan guddiga baarlamaanka Masar ee arrimaha Afrika, wuxuu yiri Nofeembar 16 in Masar ay si fiican uga warqabto tallaabooyinka “xaasidnimada ah” ee Turkigu ku tagayo Soomaaliya. xakameeya Badda Cas. Bashat ayaa ku sheegay war saxaafadeedkiisa in Masar ay ka sugi doonto dunida carabta hamigoodaas xulafooyin iyo heshiisyo, si ay u sameysato Isbahaysi awood u leh kahortaga khataraha kasta, sida ay ku sameysay badda Mediterranean iyada oo loo marayo Golaha Bariga Gaas ee Bariga Dhexe .
Saameynta Turkiga ee Soomaaliya waayadaan dambe waa ay sii kordheysay. Bishii Nofeembar 7, Turkiga wuxuu ku dhawaaqay inuu bixiyay ku dhowaad 2.4 milyan oo deyn ah oo Soomaaliya ay ku lahayd Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF.
Dhanka kale, Danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mehmet Yilmaz ayaa wacad ku maray intii uu socday kulan uu magaalada Muqdisho kula yeeshay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, 6-dii Nov. si loo xoojiyo taageerada shuruud la’aanta ah ee Turkigu siinayo Soomaaliya.
Xaaladdaan dhexdeeda, Altaqi Maxamed Othman, oo ah qoraa suugaanyahan ah oo reer Suudaan ah ayaa u sheegay Al-Monitor in Turkigu uu aaday Soomaaliya si uu u magdhabo saamayntii uu ku lumiyay Suudaan kadib bixitaankii Madaxweynihii hore Cumar Al-Bashiir, oo xulafo istiraatiiji ah la ahaa. Erdogan oo uu siiyay jasiiradda Badda Cas ku taal ee Suakin intii uu xukumayay.
Bishii Nofeembar 26, 2017, Erdogan wuxuu sheegay in Bashiir uu oggolaaday in lagu wareejiyo maamulka Jasiiradda Suakin ee ku taal Badda Cas dalka Turkiga. Kormeerayaashu waxay markaa u arkeen tallaabo noocan oo kale ah isku day ay ku hareereynayaan Masar oo ay ku wiiqayaan danahooda Badda Cas.
Othman wuxuu intaas ku daray in bixitaankii Bashiir ay soo afjartay hamigii Turkiga ee ahaa inuu xukumo Suudaan, taas oo ku kaliftay Masar inay u dhawaato Suudaan oo ay sameysato xulafo militari iyo istiraatiijiyad istiraatiiji ah si loo ilaaliyo amniga Carabta.
Bishii Nofeembar 14, cutubyo ka tirsan hoggaanka sare ee Saiqa Force iyo kuwa cirka ee Masar ayaa yimid saldhigga cirka ee Marwa ee Suudaan si ay uga qayb galaan dhoolatuskii wadajirka ahaa ee Masar iyo Suudaan ee loogu magac daray Nile Eagles – 1 , markii ugu horreysay taariikhda labada dal.
Othman oo ka faalloonaya Masar inay ku biirto xulafada Israel iyo Suudaan, wuxuu sheegay in Masar ay isku dayeyso inay ka faa’iideysato caadi ahaanshaha xiriirka Israa’iil iyo Suudaan si ay u dhisto isbahaysi ka horyimaada hamiga Turkiga ee Badda Cas. Wuxuu yidhi, “Isbahaysigani kuma koobna oo keliya saddex xisbi. Waxa kale oo ku jira Sucuudiga, oo xidhiidh la leh Israa’iil, inkasta oo aan la shaacin marka loo eego xasaasiyadda mowqifkeeda. ”
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay Oktoobar 23 in Suudaan ogolaatay inay caadi ka dhigto xiriirka Israel.
Othman wuxuu filayey in isbahaysigan uu noqon doono mid xoogan oo guuleysta – iyadoo la ogyahay joogitaanka Israel oo ka baqeysa hanjabaadaha Turkiga iyo Iiraan ee Badda Cas – joojinta horumarka Turkiga ee gobolka.
Amani al-Tawil, oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Afrika Xarunta Al-Ahram ee Daraasaadka Siyaasadda iyo Istiraatiijiyadda, ayaa u sheegay Al-Monitor in aysan ahayn markii ugu horreysay ee ay Masar doonayso in ay sameysato gole awood u leh in uu wajaho Turkiga, maadaama ay horay ula shaqeyn jirtay. Sacuudi Carabiya oo ku xaqiijineysa Badda Cas iyada oo loo marayo jimicsi wadajir ah si looga ilaaliyo marin haynta Badda Cas wixii khatar ah.
Waxay xustay in Masar ay sidoo kale furtay saldhiga milateri ee Berenice oo ku yaal koonfurta Badda Cas si looga hortago hanjabaadaha iyo himilooyinka Turkiga ee gobolka. Tawil wuxuu rumeysan yahay in dadaalka Masar ee ku aaddan keenista xisbiyo cusub ay tahay tallaabo wanaagsan oo yeelan doonta saameyn wax ku ool ah oo awood leh, gaar ahaan tan iyo markii Israel ay u baahan tahay inay ka ilaaliso gobolka qatar kasta oo ka imaaneysa Badda Cas, ha ahaadeen Iran ama Turki.
Masar ayaa ku dhawaaqday Jan. 22 inay bilaabeyso tababarka wadajirka ah ee Masar iyo Sacuudiga ee loogu magac daray Morgan-16, ee Badda Cas, iyadoo ujeedku yahay in la xoojiyo amniga badaha ee gobolka lana wajaho khatar kasta.
Janaayo 15, Masar waxay furtay saldhiga milateri ee Berenice, oo ah kan ugu weyn Badda Cas iyo Afrika oo leh bed dhererkeedu yahay ku dhowaad 150,000 feeddans (155,000 acres), oo ku yaal xeebta Badda Cas. Ujeeddadu waa in laga ilaaliyo xeebaha carbeed ee ku teedsan Badda Cas wax weerar ah.